Yokwakha yaseGrisi Sibhekene chipboard - China Weifang Injabulo Sea Trade
Ifenisha kodwa okubiza kakhulu ukuba angasebenzisa ezihlukahlukene fiberboard kanye nokhuni zemvelo nepepper. Ukubukeka efanayo Kungafezani ngento eziyisisekelo ibhodi kanye nezinkampani eziningana kuqhakanjiswe ifenisha baye baphumelela kakhulu uyisebenzisa njengoba impahla zabo eziyinhloko.
Igama lomkhiqizo Yokwakha yaseGrisi Sibhekene chipboard
Usayizi 1220mm * 2440mm (4'x8 ') noma usayizi ngezifiso.
Ukubekezelelana wugqinsi <+ - 0.2mm
Ubuso / Emuva yokwakha yaseGrisi
yokwakha yaseGrisi Lesitshalo birch, mahogany, umlotha, Sapele, ziyadliwa, teak, i-oki, Maple, beech, cherry, obomvu rose, ect.
yokwakha yaseGrisi Ibanga A, AA noma AAA
Ukubhekana Uhlobo Single-Sibhekene, kabili Sibhekene
Material Core Poplar, izithelo zomuthi, uphayini noma elixutshwe chips izinkuni
Ubuningi 680 ~ 730kg / M3
umswakama kokuqukethwe 5% -10%
Emission Amazinga formaldehyde E0 / E1 / E2
Ukusetshenziswa nokusebenza Particle isiyenezelwe kabanzi ifenisha kanye umhlobiso ingaphakathi. Nge izakhiwo ezinhle, ezifana, fabricability lula, amandla okusezingeni eliphezulu ukugoba, screw ubambe ikhono eqinile, ezimelana nokushisa, anti-static, okuhlala isikhathi eside nokuyingozi akunamthelela kwesizini.
ukupakisha Standard Export Pallet Impahla - Faster futhi ephephile ukulayisha phansi, kanye nezindleko kancane zabasebenzi amacala, kodwa ngaphansi ubuningi ngesikhathi esifanayo.
Okufakiwe Okuxekethile - Ayikwazanga ukulayisha ubuningi okwengeziwe le mpahla efanayo, kodwa abiza ngaphezulu amacala zabasebenzi ukulayisha phansi.
Inkokhelo Imigomo 30% T / T idiphozi phambi ukukhiqizwa futhi ibhalansi ngokumelene ikhophi B / LL / C.
Isikhathi sokuthumela Zingakapheli izinsuku eziyi-15 ngemuva kokuthola idiphozi noma L yasekuqaleni / C at emehlweni
Kabanzi isicelo ifenisha. Ikhishi amakhabethe, Office edeskini, iphaneli emaceleni, yokudlela amasethi, umnyango ngaphakathi.
1. Ukwenza Ifenisha
Ifenisha kodwa okubiza kakhulu ukuba angasebenzisa ezihlukahlukene fiberboard kanye nokhuni zemvelo nepepper. Ukubukeka efanayo Kungafezani ngento eziyisisekelo ibhodi kanye nezinkampani eziningana kuqhakanjiswe ifenisha kuye kwadingeka omkhulu
impumelelo uyisebenzisa njengoba impahla zabo eziyinhloko.
Ikhambi best ukusebenzisa kuyizinhlayiyana izimo ebhodini kanye nokhuni yangempela ubuso. Lokhu kwakha iKhabhinethi sasivumela engabizi futhi kwenza kuyizinhlayiyana ibhodi umkhiqizo ethandwa embonini.
3. I-Home Ukuphimisela
Indawo ezidume kakhulu nangezindlela abamzungezile emafasiteleni, eminyango, phansi nophahla ngesimo ngombala futhi ekubumbeni. Lezi izinto zenziwa eshibhile lapho ziyadalwa kusukela kuyizinhlayiyana ebhodini. Particle Esikebheni
Kulula ukufaka futhi kulula ukudweba.
Particle ibhodi ngokuvamile alisetshenziswa njengoba flooring main kodwa ivame ukumboza oluqinile izibuya ukuthi sezivele zikhona ikhaya.
1) okuphezulu eguqa amandla
2) komugqa kancane ukunwetshwa Coefficient
3) Namandla nail eliyifa
4) umswakama ubufakazi kanye nomsebenzi lula
5) ukwakhiwa Tight namandla eliphezulu
6) Akukho ratten noma ukubola
7) okuphansi formaldehyde ekushayweni
4. eningiliziwe ukulawula izinga ohlelweni.
6. Nikeza umkhakha umkhiqizo Amathrendi mahhala, ukuncoma imikhiqizo nezisombululo ngokuvumelana isimo langempela amakhasimende '.
7.Provide khulula emphakathini zokwakha lokuhweba amakhasimende 'ukunyathelisa futhi ukukhuthazwa.
10. Sinikeza amasevisi khulula e China kuya eside amakhasimende eside, ezifana amahhotela yokubhuka, iziqondiso, usizo wokuthenga, kokuhlola ukwaziswa ezinye izinkampani, futhi ngifuna izinga nabathengisi eminye imikhiqizo.
Q1: Ingabe inkampani yakho kuyinto imboni noma ukuhweba inkampani?
A1: Singabantu ifektri lochwepheshe, anganikeza umkhiqizo kuwe izinga esitebeleni ngaso sonke isikhathi.
Q2: Iyini eside inkokhelo?
A2: 30% T / T idiphozi ekuqaleni, u-70% esele pay phambi mpahla. 100% yokukhokha ngokugcwele ekuqaleni ngoba isampula oda.
Q3: izindlela zakho zokukhokha Yiziphi?
Q4: Samukela T / T, Alipay, L / C, i-PayPal nge-credit card
Q4: Kungakanani ukuthutha izindleko?
A4: Sicela iseluleko kithi ikheli noma uya khona imbobo, sizobe ukhethe indlela engcono kakhulu ukuthutha. Futhi ngithi kini isabelomali ngokuvumelana nenani.
Q5: Iyini MOQ?
A5: MOQ wethu 1 Pallet. Ayikho MOQ ngoba isampula oda.
Unemibuzo ukujabulisa umlayezo noma call me. Kubonga mina ukusebenzisana nawe.
Okulandelayo: chipboard manzi
yokwakha yaseGrisi chipboard